पूँजीबजार लगानीकर्ता संघको केन्द्रिय अध्यक्ष राधा पोखरेलको भाषण, मार्मिक र हृदय विधारक लाग्यो । पुरै पढनेले आँशु नझारी सुखै छैन !! – Shirish News
प्रमूख अतिथी प्रदेश नं. २ का मूख्य मन्त्री लालवावु राउत ज्यू विशेष अतिथी आर्थिक मामिला मन्त्री ज्यू विशेष अतिथी प्रमूख सचेतक ज्यू विशेष अतिथी , प्रतिपक्ष दलका नेता ज्यू उपस्थित अतिथी ज्यूहरु नेपाल पूँजीवजार लगानीकर्ता संघका प्रदेश संयोजक योजक , सह-संयोजक तथा जिल्ला संयोजक , सह- संयोजक ज्यूहरु पत्रकार मित्रहरु लगानीकर्ता साथीहरु तथा उपस्थित आमा , वुवा , दाजु ,भाई , दिदी , वहिनी हरुमा म पूँजीबजार लगानीकर्ता संघको केन्द्रिय अध्यक्ष राधा पोखरेलको तर्फवाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु ।
सर्व प्रथम आजको “सेयर बजारमा अवसर तथा चुनौतिहरु” विषयको अन्तरकृया कार्यक्रम राखेर मलाई समेत मंन्च उपलव्ध गराउनु भएकोमा प्रदेश नं. दुईका पूँजीबजारमा आवद्ध पदाधिकारी ज्यू हरु प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । जसरी नेपालको तराईको भूभागमा रहनुहुने हाम्रा अादरणिय ज्यू हरुले तराई र भारतको सम्वन्धलाई “रोटी र वेटीको “ सम्वन्धको नामाकरण गर्नु भएको छ । हो ठ्याक्कै यो दुई नम्वर प्रदेशको र मेरो सम्वन्ध त्यस्तै नै हो । किनकी म तपाँईहरुकै एक चेली जस्को जन्म महोत्तरी जिल्लाको किसाननगर भन्ने गाँऊमा भएको हो ।
अझ भनौ म जन्मेका मात्र होईन मैले माध्यामिक शिक्षा समेत सोही गाँउमा हासिल गरेकी याहाँहरुकै काखपोल्टामा हुर्किएकी एक “वेटी” हुँ । यसै शिलसिलामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर गाँउमा नभएकोले २०६१ सालमा काठमाण्डौ छिरे र मास्टर डिग्री हासिल गरें । म सानै छदा नयाँ नयाँ खोज , अनुशन्धान र अन्वेषण गरिरहन्थे । छोरीले पनि चाहे भने हिम्मत गरे भने छोरा सरह गर्न सक्छन भन्ने मलाई ४/५ क्लासमै पढदा लाग्ने गर्थ्यो ।
हेर्नस त आज म १५ लाख लगानीकर्ताको केन्द्रिय अध्यक्ष भएर तपाँईहरुको माझ तपाँईहरुकै वेटी भएर आएकी छु । म छोरी चेलीले केही गर्न सक्दैन भन्ने भ्रम पनि चिर्नको लागि यो क्रर्यक्रममा स्वयमं उपस्थित भएकी हुँ । अझ म भित्र छिपेको राज म यहाँहरुलाई यसै कार्यक्रम मार्फत वताउन चाहन्छु । हेर्नुस म एक मुटुरोगी वेटी हुँ । मेरो आज भन्दा १४ वर्ष पहिला ओपनहर्ट सर्जरी गरी मुटुका दुई भल्भहरु फेरीएका छन । वेटी त्यसमा पनि मुटु चिरिएकी वेटी !!! घरको पेरीफेरी मै मात्र सिमित हुनु पर्ने अवस्थाकी हुन भनेर पनि केहीले मलाई भनेका थिए । तर मैले हिम्मत हारिन । वरु मैले भरखर भरखर वामे सर्दै गरेको नेपाली पूँजीबजारलाई नेपालका कुना कन्दरा, दुरदराज समेतमा पुर्याउछु भनेर अग्रसर हुदै आएकी छु ।
त्यसमा पनि मेरो २ नं. प्रदेशमै आँखा लाग्नुको पछाडीको राज भनेको यस प्रदेशलाई केन्द्रले अलि वढी उपेक्षा गरेकोले पनि हो । केन्द्र सरकारलाई म यसै मन्चवाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने “ सरकार यो जानकी जी को भूमिलाई नहेप उनै जानकीको फेरी मिथिलामा जन्म भएको छ , पूँजीबजारको माध्यमवाट ।
हामिलाई अशिक्षा , पछौटेपन , चरम गरिवीमा धकेलिएको हुँदा केन्द्र सरकारलाई म झकझकाई रहने छु । कानमा तेल हालेर वस्न दिने छैन । नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघले यसै आर्थिक वर्ष भित्र मुलुका सातै प्रदेशमा यस्तै भव्य कार्यक्रम राख्दैछ । त्यस मध्य मैले सर्व प्रथम हाम्रो कार्यक्रमको विगुल दुई नं. प्रदेशवाट फुकौ र उक्त कार्यक्रममा केन्द्रवाट म स्वयमं जान्छु भनेर निर्णय पारित गराएकै हुँ । यो जानकी जी को भूमि जसलाई राज्य पूनसंरचना गर्दा हेपिएको छ । अरु प्रदेशलाई उत्तर दक्षिण चिरा पारिएका छ । हेर्नुस त हाम्रो प्रदेशलाई गरिएको विवेध !! हाम्रा आजका प्रमूख अतिथी तथा मूख्य मन्त्री लालवावू राउत ज्यूलाई साछि राखेर यो कुरा भन्छु भन्ने सपना देखेकी थियो । मेरो सपना पुरा भएको छ ।
वाँकी केन्द्रिय सरकार संग उहाले मुकाविला गर्नु नै हुनेछ । मूख्य मन्त्री जो हुनुहुन्छ , उहालाई मैले वाल्यकालवाटनै चिनेको थिए । उहाँ एक असल , कर्तव्य परायण नेता जी हुनुहुन्छ । मैले पार्टिगत विभेद देख्दिन उहामा । उहँको क्षमता र प्रतिभा भनेको सवै संग हातेमालो गरेर हिडने खालको छ ।
त्यसैले त हाम्रो पहिलो कार्यक्रम प्रदेश नं. दुईवाट हुदैछ । उहा भनेको दुई नं. प्रदेशको मूख्य मन्त्री मात्र होईन , हाम्रो आँखाको नानी , हृदयको ढुकढुकी , करुणाको खानी , वौधिक एवं मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । मैले उहाँको जतिनै प्रशंसा गरेपनि कमै हुन्छ । उहाँकै स्नेहले आज म यो ठाँउमा छु भनेर पनि कहिल्यै भुल्ने छैन । यि त भए समसामयिक र राजनितिक कुरा अव म यहाँहरुलाई पूँजीबजारका केही खास खास कुरा गर्न चाहन्छु ।
तरुण दलको संगठन विस्तार